I-Gelugpa Iyingxenye yeBuddhism yaseTibetan
Isikolo seDalai Lama
I-Gelugpa iyaziwa kakhulu eNtshona njengesikolo sobuBuddhism saseTibetan esihambelana noBungcwele bayo iDalai Lama . Ngekhulu le-17 leminyaka, isikolo saseGeluk (nesipilili saseGeluk) saba liziko elinamandla kunazo zonke eTibet, kwaye lahlala lide lide iChina ithathe ulawulo lweTibet kuma-1950.
Ibali likaGelugpa liqala kunye neTsongkhapa (1357-1419), indoda evela kwisifundazwe sase-Amdo eyaqala ukufunda kunye no- Sakya lama wendawo eselula kakhulu.
Nge-16 waya e-central Tibet, apho kwakukhona khona ootitshala abaqashileyo kunye neendwendwe, ukuze baqhubele phambili imfundo.
UTongkhapa akazange afunde kwindawo enye. Wahlala kwiiyunithi zakwa- Kagyu zokufunda i-Tibetan, i-Mahamudra kunye ne- yoraga yase-Atisha. Wafunda ifilosofi kwiimonasteri zaseSaka. Wafuna ootitshala abazimeleyo ngeengcamango ezintsha. Wayenomdla kakhulu kwiimfundiso zeMadhyamika zase Nagarjuna .
Ngexesha, iTongkhapa idibanise le mfundiso ibe yindlela entsha yokuBuddhism. Wachaza indlela yakhe kwimisebenzi emibini emikhulu, Ukubonakalisa Okuphezulu Kwezindlela Zendlela kunye neMbonakalo Enkulu yeMantra Eyimfihlo . Enye yeemfundiso zakhe zaqokelelwa kwimibandela emininzi, 18 kuzo zonke.
Ngenxa yobuninzi bomntu omdala, uTongkhapa wayehamba ngeTibet, ehlala eenkampini kunye nabafundi abaninzi. Ngeli xesha uTongkhapa wayefikelele kwiminyaka engama-50 ubudala ubomi obunqabileyo bebenomthwalo kwizempilo.
Abammemezeli bakhe bamakhela iindwendwe ezintsha kwiintaba kufuphi naseLhasa. Indwendwe yabizwa ngokuba ngu "Ganden," oku kuthetha "uvuyo." U-Tsongkhapa wayehlala khona kancinci ngaphambi kokuba afe, nangona kunjalo.
Ngethuba lokufa kwakhe, uTongkhapa kunye nabafundi bakhe babecingwa njengengxenye yesikolo saseSakya.
Emva koko abafundi bakhe bahamba bakha isikolo esitsha seBibetan Buddhism kwiimfundiso zikaTsongkhapa. Bambiza isikolo "iGelug," oku kuthetha "isithethe esihle." Nazi ezinye zezifundo ezibalaseleyo zikaTongkhapa:
UGyaltsab (1364-1431) kucatshangelwa ukuba ngowokuqala u-Abbot waseGendun emva kokufa kukaTsongkhapa. Oku kwamenza waba ngowokuqala uGanden Tripa, okanye umnini wetrone weGendun. Kuze kube namhlanje iGanden Tripa yinyani, inkulu esemthethweni yesikolo saseGelug, kungekhona i-Dalai Lama.
UJamchen Chojey (1355-1435) wasungula i-monastery enkulu yaseSera yaseLhasa.
I-Khedrub (1385-1438) ixelwe ngokukhusela nokukhuthaza iimfundiso zikaTsongkhapa kulo lonke i-Tibet. Wabuye waqala isithethe se-lamas esiphezulu saseGelug egqoke izigqoko eziphuzi, ukuba zihluke kwi-Sakya lamas, ezazigqoke izigqoko ezibomvu.
UGendun Drupa (1391-1474) wasungula iindwendwe ezinkulu zeDrepung kunye noTashillhunpo, kwaye ebomini bakhe wayephakathi kwabaphengululi abahlonishwa kakhulu eTibet.
Emva kweminyaka embalwa emva kokufa kukaGendun Drupa, inkwenkwana ephakathi kweTibet yaqatshelwa njengeTulku yakhe, okanye ibuyela kwakhona. Ekugqibeleni, le nkwenkwana, uGendun Gyatso (1475-1542) yayiza kuba ngumntu ohlala eDrepung, eTashillhunpo, naseSera.
U-Sonam Gyatso (1543-1588) waqatshelwa njenge-Gendun Gyatso.
Le tulku yaba ngumcebisi ngokomoya kumholi weMongol ogama linguAltan Khan. UAltan Khan wanikela uGendun Gyatso igama elithi "Dalai Lama," elithetha "ulwandle lobulumko." USonam Gyatso uthathwa njengowesithathu uDalai Lama; abaphambi kwakhe uGendun Drupa kunye noGendun Gyatso babibizwa ngokuba ngabokuqala kunye neyesibini iDalai Lama, emva kwexesha.
Lawa maDalai Lamas ayengenalo igunya lopolitiko. KwakunguLobsang Gyatso, "Owesibini Omkhulu" uDalai Lama (1617-1682), owakha inzulane kunye nomnye umongameli waseMongol, uGushi Khan, owawunqoba iTibet. UGushi Khan wenza uLobsang Gyatso umholi wezopolitiko kunye nokomoya lwabantu bonke baseTibetan.
Ngaphantsi kweGreat Fifth inxalenye enkulu yesikolo saseBibetan Buddhism, uJonang , sasixhaswa eGelugpa. Iimpembelelo zeJonang zanezela iimfundiso zikaKalakra kwiGelugpa. I-Great Fifth nayo yaqalisa ukwakha iNkundla yasePotala eLhasa, eyaba yindawo yokuziphathisa okomoya kunye nezopolitiko eTibet.
Namhlanje abantu abaninzi bacinga ukuba i-Dalai Lamas ibambe amandla onke eTibet njengothixo-ookumkani , kodwa oko akuchanekanga. I-Dalai Lamas eza emva kwe-Great Fifth, ngenxa yesinye isizathu okanye enye, ininzi yabantu abangenamandla okwenene. Kwixesha elide elide, iirejista ezahlukeneyo kunye neenkokheli zemikhosi zazinene.
Ngaphambi kweDalai Lama ye-13, uThubten Gyatso (1876-1933), ngaba omnye u-Dalai Lama usebenza njengenhloko yonyango ka rhu lumente, kwaye wayenamandla okunciphisa ukulungiswa konke ukulungiswa ayekufuna ukuzisa eTibet.
I-Dalai Lama yangoku i-14, Ubungcwele bayo Tenzin Gyatso (owazalwa ngo-1935). Wayesemncinci xa iChina yahlasela iTibet ngo-1950. Ubungcwele bakhe buye buxoshwa eTibet ukususela ngo-1959. Kungekudala wabulala amandla onke ezopolitiko kubantu baseTibet ekuthunjweni, ngenxa yolawulo olukhethiweyo lwentando yesininzi.
Funda ngakumbi: " Ukuphumelela kweDalai Lamas "
Isibini lesibini eliseGelugpa yiPanchen Lama. Isihloko esithi Panchen Lama, esithetha "intsimi enkulu," sanikwa i-Fifth Dalai Lama kwi-tulku eyayineyesine kwisizukulwana sokuzalwa kwakhona, kwaye ke waba ngu-4 ePanchen Lama.
I-Panchen Lama yangoku i-11. Nangona kunjalo, ubungcwele bakhe uGedhun Choekyi Nyima (owazalwa ngo-1989) kunye nentsapho yakhe bathatyathwa kwisiTshayina emva nje kokubhengezwa kwakhe kwaziwa ngo-1995. I-Panchen Lama kunye nentsapho yakhe ayibonakalwanga oko. U- pretender oqeshwe nguBeijin g, uGyaltsen Norbu, usebenze njengePanchen Lama endaweni yakhe.
Funda Okunye: " Inkqubo yokuThuthukiswa kweTshayina yaseChina "
Indlu yasekhaya yaseGanden yasekhaya, ikhaya likaThixo laseGelugpa, labhujiswa yimikhosi yaseTshayina ngexesha lovuko lwaseLhasa ngo- 1959 . Ngexesha leNkqubela yeNkcubeko , i-Red Guard yagqiba yonke into eyashiywe. Kwaye nomzimba ongummangaliso weTongkhapa wawuyalelwa ukuba utshiswe, nangona umonki wakwazi ukuphinda uphinde uphinde uphinde uthuthuke. Urhulumente waseTshayina ukwakhiwa kwakhona kweendwendwe.
Okwangoku, i-lamas yasekugqibeleni idluliselwe uGanden eKarnataka, eIndiya, kwaye le ndwendwe ngoku ikhaya likaThixo laseGelugpa. I-Ganden Tripa yangoku, eyi-102, iThubten Nyima Lungtok Tenzin Norbu. (I-Ganden Tripas ayikho i-tulkus kodwa iyakunikwa isikhundla njengabantu abadala.) Ukuqeqeshwa kwezizukulwana ezintsha ze-Gelugpa kunye neentonga ziqhubeka.
Ubungcwele bakhe u-14 Dalai Lama uhlala eDharamsala, eIndiya, ekubeni uhambe eTibet ngo-1959. Uzinikezele ubomi bakhe ekufundiseni nasekuzuzeni ukuzimela okukhulu kwabaseTibetana abasengaphansi kweTshayina.
Jizo Bosatsu kunye nendima yakhe
Yiyiphi iNgqungquthela yamaBuddhist of Renunciation?
IiBuddha eziLwazi eziLungileyo: Ezivela kuyo; Oko ba zimela
Umhla wokuzalwa kaBuddha
Iqela leTyol Inkcazo
Intaba yeSandel - Indawo yokuhlala yeMesolithic e-Ireland
5 Iimfuneko zokuqalisa umsebenzi wePoint
I-Emory University GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data
UFrederick Douglass Quotes kwiLungelo lamaBhinqa
I-Strange neNdaba ebandezelekileyo yeJam Master Jay
Indlela yokudibanisa 'Ukuqhuba' kunye nezinye iilwimi Ukugqiba '-ducir'
Iintsingiselo zeMilinganiselo yeeMidlalo
Iinkampani zokuThengisa iiCarbon Fiber
Edala kufuphi neMpumalanga Iimephu
Iindlela ezi-4 zokuqhuba umtshato womtshato ukunyanzelisa i-Couple
Indlela i-Spitzer Space Telescope ibona ngayo i-Universe Infrared
Ngaba uTommy Hilfiger uhlanga?
Umculo wePiano othi "UThixo Uphumle Uvuyiswe, Madoda"
Ukusebenzisa i-verb Tocar yeSelwimi
Kutheni i-Vaccine Vaccine iSebenzi
Funda isiJamani esithi "Usapho" (kufa Familie)
I-Sonnet: Inkondlo kwiimitha ezili-14
Indlela yokusetha nokusebenzisa i-SSH kwi-Raspberry PI